URonald Bernard kanye nokucabanga 'kwenkathi entsha lapho inkululeko yokuzikhethela yomuntu ihlonishwa khona futhi': uMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-23 March 2018	• 24 Amazwana
Ngithole izimpendulo ezimbalwa isihloko sami sokugcina mayelana noRonald Bernard obonisa ukuthi abaningi bathola izindaba zakhe ezinhle futhi ezimnandi. Ngeshwa, kufanele ngiphethe ngokuthi laba bantu sebewile phansi Amasu we-NLP, lapho akwazi khona ukukholisa abantu ngesisekelo sobufakazi obuphelele obungekho. Izingxoxo zakhe ziqondiswa kahle futhi inqubo yefilimu nokuvulwa kwesikhumbuzo kukhumbuza kancane isitayela somsakazo waseBuddhist, okuyinto engazi lutho ngokushesha iveza isithombe sabantu abaningi abangokomoya. Izindaba zakhe zibukeka zimnandi ngoba ucela izihloko eziningi ezithinta abezindaba. Noma kunjalo, akukho indaba evela kuBernard ingaqinisekiswa. Lokho ngokwalo akusho lutho, akunjalo yini ukuthi uyayisebenzisa ngasese ukuze wakhe isithombe sokuthi 'ulungile nami' nokuthi 'Ngiphumelele inqubo yonke'. Kungikhumbuza kancane abaguqulwa emibuthanweni ye-Evangelical futhi nabo bonke badabula esigodini esijulile futhi ekugcineni baphela iNkosi futhi manje bayajabula kakhulu. URonald Bernard ubonisa ivangeli elihle ngalesi sikhathi, kodwa ngaphandle kukaJesu.
Sibona ividiyo engxenyeni ye-5 ubuye abukho ubufakazi bokuthi inkampani yakhe ephumelele ePortugal futhi akukho bufakazi bokuthi isikhathi sakhe sejele noma izikhalazo zakhe zezigidi. Konke kubonakala sengathi yizindaba ukwenza izindaba zangaphambili zithembeke. Umyalezo oyisisekelo ochungechungeni lwezingxoxo njalo: Ngivela phezulu, ngidabula izigodi ezijulile, ngilwa nokubi futhi ngafunda isifundo engifuna ukukugcina sonke. Ulimi lwe-NLP ekusetshenzisweni kwakhe okunamandla kakhulu (okudingekayo ukuze kube nomphumela we-NLP) njalo kugcizelela ukunakekelwa kombukeli kuye noma kwenza ukuziphatha okugcizelela ukugxeka. Konke uBernard akushilo kuze kube manje ucela kuphela ulwazi nolwazi lwesithakazelo sombukeli oswele. "Sineqhawe eliye lazibonela futhi lahlala kulokho esikulokhu sicabanga ngakho. Sinomholi omusha, i-guru entsha."
Yiqiniso, uRonald uyaqaphela ukuthi kumele adlale ngokucophelela futhi, njengalawo wonke ama-guru, kufanele azenze aphansi futhi azincane. Yilokho iqhinga. Futhi manje uMartin Vrijland uphikisana nalo muntu. "Lokhu 'ukulwa' futhi ngakho wenza lokho okuyilokho okuyiqiniso futhi udala ukuphindaphinda futhi uphakele abadlali", Isitatimende ukuthi abaningi bayonikeza lokho.
Enye yezimpendulo engangizitholile kwakuyi:
URonald akasho ukuthi kufanele uhlehlise, kodwa ukuphakama. Futhi lokho akuyona inkathi entsha, kodwa yikuphi ukunyakaza okungezona ubudlova (izinkolo, amafilosofi, ...). U-Einstein noGandhi nabo bakhulume lokho futhi baphila ngendlela efanele. Kufika ekumangalisweni kuka-Einstein ukuthi awukwazi ukuxazulula inkinga evela ekuzileni okufanayo okwadala inkinga. Ubumnyama abukwazi ukulwa nobumnyama. Njalo iqiniso libukeka lihlukile kolwazi oluhlukile. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi usengaphambi kwesikhathi nesiphetho sakho nesahlulelo sakho
Ngokusobala uRonald uye wakwazi ukwenza ukuhumusha amaqembu amakhulu abantu ngokusekelwe kulokho esikufunayo kakhulu. Kuyinto yokwenziwa engenalo udlame (ukuthakazela), elithengiswa emhlabeni wonke ingenhlangano Lucis Trust UN phezu yezinhlangano ezingokomoya nokuthi uya inkambu amandla emhlabeni egqinsiwe ntathu lapho kumelwe senze kungekho umzabalazo wokulwa okubi, kodwa kufanele bashiye insimu yabo futhi kufanele babeke into enhle eduze kwayo. "Ubumnyama akuyona ukulwa nobumnyama," kodwa ithoshi kunjalo owenza izimangaliso. Ubuciko bezintambo kanye namanethi okuphepha kuhlale njalo bepakisa ukukhwabanisa nokukhohlisa kwabo zibe izingxenye ezinkulu zeqiniso; ngakho kulesi sikhathi. URonald Bernard kufanele asigcine esimweni seCalimero, lapho siqhubeka sikholelwa emqondweni wokuthi 'bangabantu abadala futhi ngincane kanti lokho akulungile'. Singakwazi ukulwa kahle nomnyama ngokubeka ukukhanya kulo, uma kubonakala manje. "Yebo futhi yilokho uRonald Bernard akwenzayo! Uvula i-pyramid yamandla futhi ubeka ukukhanya kuwo! Uthi nje akufanele ulwa nalo, ngoba uzofa ngokufa noma madhouse!"Yebo, uRonald Bernard ukhuluma indaba ayethanda ngayo kuyo yonke into owaziyo futhi ngaleyo ndlela unxusa ukuzithoba kwakho. Umsebenzi wakhe ukukubeka esimweni se-pacifist futhi ungamelana nokubi (nokukutshala ku-Happy Bank yakhe).
Isiqephu esivela ekuphenduleni komunye umfundi:
Yonke isintu (kuhlanganise nami), ngezinye izinto ezimbalwa, isabamatasa ekudleni izihlabane futhi ngaleyo ndlela igcine izinto ezimbi zaleli zwe. Umzabalazo olwa nama-archons uqobo umzabalazo wangaphakathi, ukunqoba kwakho, ukukhululwa emakhosini alo mhlaba. Khona-ke ungakwazi yini ngempela ukusho okuthile ngenkululeko yabanye abantu baleli zwe. Manje sekuyisikhathi esibucayi. Lo mdlalo owesabekayo odlalwa nawo futhi ngesintu uzophela ngokuphela kokusemthethweni. Kunomkhawulo futhi manje kufanele kufinyelelwe cishe. Kuzoba nesikhathi esisha, futhi ngokuphindaphindiwe, nokunye, lapho isintu singase siqale futhi nge-slate ehlanzekile. Uma nje wonke umuntu ekwazi ukuzikhulula ekujuleni kwakhe okujulile okuvela kulo mhlaba wezizwe ukuthi ngaso sonke isikhathi ngesintu ngokwawo siba umgodi wokubulala futhi.
Le ntombazane iveze kahle kakhulu umyalezo kaRuchel Trust we-Lucis Trust 'womusa'. Kulokhu, isintu silingwa ukuba sibe nenqubo yokukholelwa esekelwe emjikelezweni wokuphindukuzalwa lapho ekugcineni kufanele sifike ekukhanyeni futhi siphonse ubumbano. Ukuphindukuzalwa kungumsebenzi omuhle hhayi owodwa umphumela we-effect ukuthi kufanele ngempela siphumelele. Lokhu, futhi, kusekelwe emgodini omkhulu weqiniso. Yebo, kubonakala sengathi sibuyele emuva kuleli jele lomphefumulo, kodwa lokho 'umphumela we'futhi akukho'indlela eya'. Ubuqili obungokwalabo gumbi lomphefumulo awuqothuli njengeqhwa elangeni uma sizibekezela kuphela futhi siqhubeke siphinde sivuselele kuze kube yilapho sithola khona. Ngombono wami, lena yinkolo entsha esungulwe ukuhlukunyezwa ngokumelene nesimo se-status.
URonald Bernard uthembele esitatimendeni esivame ukuzwa, okungekho okutholakala kuso, okungukuthi: Sifikile esikhathini esisha lapho inkululeko yokuzikhethela yomuntu ihlonishwa khona futhi. Noma njengoba le nkosikazi ishilo ngenhla: Lo mdlalo owesabekayo odlalwa nawo futhi ngesintu uzophela ngokuphela kokusemthethweni. Kunomkhawulo futhi manje kufanele kufinyelelwe cishe. Kuzoba nesikhathi esisha, futhi ngokuphindaphindiwe, nokunye, lapho isintu singase siqale futhi nge-slate ehlanzekile. Yikuphi ukwaziswa kwesayense okwenziwa uRonald Bernard nabalandeli bakhe ngalesi sikhundla? Noma ingabe lokho kuyimbono yokomoya kuphela egcinelwe abantu abathile "abakhulayo"? Wayevame ukuba nakho esontweni futhi, khona-ke abantu abathile bagcwala umoya ongcwele; lokho kwakukhethekile. Kusuka kuso iphuzu lokubukwa kwe-transhumanistic uphinde ulungile (bheka ividiyo ngezansi njengesibonelo sendlela abathintekayo abacabanga ngayo futhi bafunde ngayo ngaphansi kwe-movie).
"Kodwa unguMartin Vrijland obani ubufakazi bokusayensi ukuthi siphila emphefumulweni wejele?" Manje ngifaka umcabango ukuze ucabange ngakho futhi ubonise ukubonakaliswa kusayithi esingafunda kuzo izinto ezithile bonisa izitatimende zezinhlamvu ezithile ezidumile ezibonisa ukuthi singaphila ekufaniseni. Ngithatha umbono wokuthi ufana kakhulu nokuthi umphefumulo wethu ulingwa kulokulinganiswa okufana nokuphila nokuthi sisejele manje. Angikuphikisana nemithetho esetshenzisiwe engavumelekile njenge Sifikile esikhathini esisha lapho inkululeko yokuzikhethela yomuntu ihlonishwa khona futhi. Lokhu kuyinto enjengeyakho obiza ngokuthi 'amandla adonsela phansi aphakanyisiwe'. (funda okuningi ngaphansi kwevidiyo)
Ngokusobala, imithetho efana nodlame ngesikhathi se-transhumanism namayunivesithi adalwe ngamadijithi ngeke kusadingeka ukuthi isebenze. Ukubukeka okungokoqobo kanye nokungathandwa kwabathelisi esikubona kwekusasa elikuseduze kuyoba kangcono kakhulu kunamanje wanamuhla esikrinini esicwecwe futhi kungenziwa kubonakala ebuchosheni bethu (nge-lace neural lace ne-Elon Musk). Ngaphakathi kwalemidlalo emisha singashiya noma sishintshe imithetho ethile. Ngakho-ke singacabanga ngomzimba ngamaphiko bese sihamba noma sisusa ngokuphelele amandla. Kodwa ngaphakathi kulendawo yonke umphefumulo wethu usekhona emzimbeni wethu we-bio-avatar nokuthi imisebenzi yomzimba ngaphakathi kwemithetho yendawo yonke. Kule ndawo yonke imithombo yamandla isebenzisa lokho okusikhawulelisayo, njengensimu yamandla adonsela phansi. Kunezibonakaliso zokuthi sikwazi ukuphikisa amandla adonsela phansi, njengoba kungabonakala uma sigibela indiza. Kodwa-ke, azikho izibonakaliso ukuthi isikhathi se "intando yokuzikhethela" sesifikile. Ngokuphambene nalokho, intando yokuzikhethela iyaqhubeka igxiliwe futhi icindezelwe.
Isikhathi senkululeko yokuzikhethela asikafiki; Inkululeko yokuzikhethela iyazimele ngaphandle kwesikhathi futhi ngaphandle kwalesi sigwebo somphefumulo. Inkululeko yokuzikhethela iyinhloko yokuthi singobani, kodwa ayihlangene nokungabi namandla. Umqondo wokuthi 'akudingeki ungene ensimini yomunye umuntu' futhi uhlale ku-bubble yakho imisindo enhle kakhulu, kodwa lawo onke amarekhodi awasekelwe kunoma yini. Lezi yizimiso okumelwe ziqiniseke ukuthi sihlala sizinzile nokuthi asiboni ingozi esibhekene nayo. Kuyindlela entsha yokukholelwa ukuthi, njengokungathi, 'vumela konke kwenzeke'.
Inkululeko yokuzikhethela iyisisekelo salokho esiyikho futhi lokho umphefumulo onamandla ovela kuwo obala ngaphandle kwalesi sizungu sokuphindukuzalwa. Silingeka ukuba singene kulolukulingisa futhi umphefumulo wethu, njengokungathi, umbukeli. Qhathanisa lokho ngokudlala umdlalo ku-playstation, lapho usuvele uphele khona kumdlali wakho esikrinini sakho. Kodwa-ke, lokhu okufaniswayo kuyindlela yokuphila kangangokuthi sesiye sabonakala ngephuputha emdlalweni. Size sizibonele nge-bioavatar yethu; nomzimba wethu. Size ukuzitholela ngokweqiniso okwenziwe njengoba siyazi; le ndawo nomhlaba. Futhi yebo, ngaphakathi kwalowo mdlalo kukhona okuhle nokubi kanye nesakhiwo samandla emipiramidi njengabalindi bomdlalo okufanele kuqinisekiswe ukuthi iskripthi siya ngokuya ngokuhlelwa. Le vidiyo ngezansi inikeza umqondo wokuthi ungakwazi kanjani ukuzibona kalula ngomzimba we-avatar noma ingxenye yomzimba. (funda okuningi ngaphansi kwevidiyo)
Kusukela kumqondo wokuthi siphila ekufaniseni ukuthi sikholelwa ukuthi kunenkathi entsha lapho inkululeko yokuzikhethela ihlonishwa khona. Phela, zonke izibonakaliso zibonisa ukuthi sekufikile isikhathi lapho umphefumulo uphuthunyiswa ngisho nangaphezulu ngentando yakhe yokuzikhethela. Siya ngasekupheleni kwe-transhumanism, lapho kufanele kancane kancane sishintshe sibe yi-cyborgs. Futhi lokho kusho ukuthi umphefumulo wethu-obonakala ukhohlwe umsuka wayo ngaphandle kwalolu mdlalo - uthathwa isinyathelo esiseduze. Ukuthi konke kuhamba ngendlela efanayo yesilingo, okungukuthi lapho singathola khona umhlaba omusha kanye nezimfanelo ezivela kuNkulunkulu singathola kanye nesilingo esiyaziyo emibhalweni yenkolo nasezindabeni zabo zokudala (njengoGenesise).
Inkululeko yokuzikhethela ibilokhu ikhona futhi iyakuba khona njalo. Khona-ke sikhuluma ngenkululeko yokuzikhethela yomphefumulo wakho. Noma kunjalo, inkinga yukuthi, kusukela isilingo sokuhlanganyela kulo mdlalo, indlela yokuvimba ivinjiwe. Njengoba sesinqume ukuzilayisha kulesi siqalo, othintana nento yethu yokuqala, njengokungathi, kukhishwe umlilo. Kodwa ngicabanga ukuthi umphefumulo unemingcele ye-quantum neyokuqala. Ngakho-ke ukukhulumisana kuphelele ngokuphelele futhi ngeke kuphulwe. Uma nje sithola ukuthi siphila ekufaniseni futhi ukuthi (ngomakhi walo mdlalo) kwenziwa umzamo wokusivikela, siyazi nokuthi yini eyisikhathi esifushane.
Ukusuka ocwaningweni lapha esakhiweni esivame ukuchazwa kubonisa ukuthi umakhi ubizwa ngokuthi uLusifer. Umgomo walolu Lucifer kubonakala sengathi wawuhlanganisa imiphefumulo eminingi ngangokunokwenzeka ekuboniseni kwakhe. Isizathu salokhu siphinde sizuze uhla lwezihloko ngokwazo, kodwa ake sigxile kulokhu okufaniswayo. Uma nje sithola ukuthi siboshiwe ngokulinganisa, lokho kungase kube nzima kakhulu. Ngenhlanhla, inkolo nengokomoya kuletha ithemba (lamanga). Isixazululo esidala kwakunguJesu; i-entsha yile 'yesikhathi esisha' nokukhanya. Isixazululo, noma kunjalo, silula futhi siqamba amanga ngokwemvelo yokutholakala kwe-quantum etholakala yisayensi. Umphefumulo wethu ukhuluma, ngokungenakutshala futhi ngaphandle kokulibaziseka ezweni langaphandle (ngaphandle kwalolu cingo lomphefumulo weLuciferian). Ngokungahumushi nokuhumusha ukusebenza kwalesi sigwebo somphefumulo, empeleni sikhuluma ngokuthi "nezwe elingaphandle". Futhi kusukela kulowo mkhakha uboya bezinwele kuleli jele ungaqala ukuphakama futhi i-firewall ingahlulwa.
Ukuzibophezela kwe-Quantum kuyisimo se-quantum mechanics lapho izinto ezimbili noma ngaphezulu zixhunywe ngendlela yokuthi into eyodwa ayikwazi ukuchazwa ngokugcwele ngaphandle kokukhuluma ngokuqondile - ngisho noma lezi zinto ezimbili zihlukanisiwe ngendawo.
Ukwesaba amandla nomqondo wokuthi uma uletha ububi ekukhanyeni kosuku, kufanele ukhokhe lokhu ngokufa noma i-madhouse, isekelwe emcabangweni weCalimero wokuthi 'zinkulu futhi ziqinile futhi ngincane'. Lokho kuyize. Umphefumulo wethu unegunya elikhulu nje ngaphandle kwalolu bubble lweLuciferian njenganoma ubani omunye. Ukwesaba ukufa noma i-madhouse kufanele kusigcine esimweni sokuzikhandla. Ngombono wami, kubalulekile ukuvula izakhiwo zamandla, ukuwabiza nokungahambisani nawo. Konke lokhu kusukela ekuqaphelweni ukuthi umphefumulo wakho usemdlalweni. Ngakho-ke ungakwazi ukuphonsa noma yikuphi ukwesaba ngaphezulu, ngisho (noma nje) ngaphambi kokufa. Ukuqothulwa kwe-quantum kuzogcina ekusebenzeni.
Amathegi: 5, de, ingxenye, afakiwe, URonald Bernard, ividiyo, i-vrije, bafuna
23 March 2018 ku-17: 01
Kuyini 'okuphindaphinda' (ukuhlala enyameni futhi)? Uphi umphefumulo okhona emzimbeni? Imfundiso kaKrisna ithi umphefumulo uhlala enhliziyweni. Kodwa ayikwazi ukulinganiswa, ngoba umphefumulo awuyona into engokwenyama. Noma akusiyo emzimbeni, kodwa ixhunyiwe nayo? Ngemva ulwazi lwami ukufanisa inkanyezi (Venus), namaFreemason efana Albert Pike umfundise occultists eziningi ukufanisa (yesiLatini lasekuseni) akukho uSathane ukuphakamisa, akusiyo. Ifilosofi ngemuva izikole Gnostic futhi isiko Luciferian ilungiselelo lokunqoba uMdali kweBhayibheli iBhayibheli / ngobunyoninco (elichazwa ngokuthi unkulunkulu umdali kanye demiurge okubi) futhi engonkulunkulu ngokwabo. Kuthiwa uVan Nimrod unamandla (omkhulu) ophikisana noMdali weBhayibheli. Imfundiso kaKrisna nayo ithi inhloso yokuphila komzimba ukuwuqeda ukuze ubuyele eMbusweni waKhe bese ungalokothi uphinde uvuseleleke.
Ngigcina ukuthi banelungelo lokuzivikela (ukubulala) uma omunye umuntu enenhloso yokukubulala. Impi phakathi kokuhle nokubi izoqhubeka ikhona emhlabeni kuze kube sekupheleni komthetho we-luciferians.
23 March 2018 ku-17: 38
Ucwaningo lwami kuze kube manje lubonisa le nkanyezi njengeSaturn. Faka lelo gama kumkhakha wokusesha.
U-Lucifer akayena unkulunkulu weBhayibheli noma uSathane weBhayibheli. Empeleni, inkolo isekelwe ezingxenyeni zeqiniso nokuhlanekezela. Lokho, ngombono wami, kusebenza kuzo zonke izinkolo, kuhlanganise nalawo amaHindu.
Ungakwazi ngokushesha uthole iminonjana ukuba iqiniso, njengoba nje wena izindaba ungakwazi ukulandelela sihlaziye izinga esesithuthuke ngalo iqiniso angathola (ngokwazi ukuthi amanga ngokuvamile nesisontekile ukukhonza inkulumo-ze izinjongo) Wena nje kufanele enze ezinye umzamo futhi lutho izimpumputhe cabanga.
25 March 2018 ku-08: 51
Ngokusho kocwaningo lwami, uLucifer (i-Morning Star Jesus) nguVenus lapho ifilosofi yokukhanyisa (i-Freemasonry) yakhelwe khona. Futhi leyo satane ingahlanganiswa noSaturn. Amademoni alandela umqondo wami imimoya yabantu abahlala emadolobheni abafihla ngemuva kwe-elite.
23 March 2018 ku-17: 29
Inhloso yalowo myalelo wezwe omusha ukubhubhisa inkumbulo yoMdali weBhayibheli emhlabeni. Ngokuka-Alice Bailey we-Theosophical Society, ubuKristu kufanele buxoshwe ezingqondweni zabantu. Nakuba ubuKristu ngokuqinisekile busekelwe ezimfundisweni zemimoya okungenani i-90%, u-Alice Bailey wayenombono wokuthi ubuKristu bungahle buhlobene kakhulu eTestamenteni Elidala. Ngakho-ke, uma ngizingela, angiyikwenza njengoJesu (ngiye ngihambe njengezimvu zokuhlatshwa ukuze ngiholele ekuhlatshweni) ukuze ngibulawe.
24 March 2018 ku-11: 35
Umdali / umakhi walo mgibe womphefumulo nguLusifa. Indawo yonke njengoba siyazi ukuthi yinto eqinisiwe yamanga: ukulinganisa.
Kungani-ke konke lokho okubi uma sesivele siboshiwe? Lokhu kungenxa yokuthi umphefumulo uhlale unenkululeko yokuzikhethela futhi okubi kangaka kuyisithuluzi esidingekayo ukusishukumisela ukuba senze umphefumulo wethu kumuntu (oyosikhulula kulokho okubi). Ukuqagela ukuthi ngubani lowo onkulunkulu? Lucis Trust & Vatican Lucifer
24 March 2018 ku-15: 08
Ngimangaze ukuthi abantu, abazibiza ngokuthi baphapheme, baqondiswa inkulumo ephathekayo yalomthengisi we-cookware ongewona. Embukisweni wokuqala, usevele ewela ebhasikisini ngenkulumo yakhe ephathekayo. Zama ukucabanga ukuthi usendaweni efanele futhi uthengisa lezi zindaba, kodwa ungacabangi ukuthi uzothola ithuba lokwenza i-movie ebizwa nge-2.
Ayikho isikhulu esimhlophe ehhashi, ekugcineni kufanele ulungise konke ngokwakho. Yiba nenkani, phila indlela yakho futhi uvumele imizwa yakho ikhulume!
24 March 2018 ku-17: 21
24 March 2018 ku-21: 13
Impi ayisoze yaphela umuntu
24 March 2018 ku-21: 41
Ukuqina kwesinye isinye sezinsika zikaSathane. (= egoism)
Yebo, siphila ekufaniseni, ngoba ingqikithi yethu ingqondo. Senza iphutha lokucabanga ukuthi umgomo wethu usezweni lomzimba.
Lo mbono ulula kakhulu, awunakwenzeka, kodwa ubekezelele kakhulu futhi wachaza izinto eziningi kakhulu isayensi engakwazi ukuyifinyelela njengento elula yengane.
UBernardo Kastrup uyachaza:
Akudingeki sikwesaba i-AI noma ukuthi sizokwazi ukuzilayisha ku-robot; akwenzeki nje ngoba iqiniso esikuhlangenwe nakho empeleni akuyona nje iphupho lokuqaphela. (kusuka kuMdali wethu / uNkulunkulu?) Ukubaluleka okungaqondakali kwalokhu ukuthi cishe sonke sinomuzwa wokuthi 'Mina'. Ngiyibona njengokwazi okuyi-ball yokuthola futhi konke okuhlangenwe nakho kwethu kokuphila kuyisibuko ebhokisini le-disco, abazi ukuthi kukhona lapho, futhi abakwazi 'ukubonana', kodwa yi-1 noma kunjalo.
24 March 2018 ku-22: 09
AI yilokhu lesi sekulingisa beyiphethe kusukela ekudalweni yayo kanye AI yakhelwe ubuchopho bethu ukunikeza amaza okwengeziwe ngokusebenzisa isixhumanisi ubuchopho, ngakho namanje siyifinyelela ngokujulile AI futhi kunzima nakakhulu ukukhumbula lokho esiyikho ngempela.
24 March 2018 ku-22: 49
Ukulinganisa 'okuphezulu' koMdali, okuyinto lapho isipiliyoni sethu sokwemvelo sisekelwe khona, ngingabiza ukuhlakanipha kwemvelo, hhayi ukuhlakanipha kwengqondo. Yilokho kanye isizathu esingeke sikwazi ukwenza noma ukukopisha i-AI ezweni lomzimba kusuka kumama kamama.
I-Musk ayinakwenzeka ukuba iphume embryophase ayifakile ngoba ayinakho ukuqonda okulungile kweqiniso esihlala kulo. I-Idealism, umqondo wokuthi okusemqoka ukuqonda, kunengqondo kakhulu kunalokho esihlala ezweni elibonakalayo.
Qhathanisa amaphupho akho neqiniso lakho elijwayelekile. Ungakwazi ngamaphupho kwakho umbono, isikhathi, uhlamvu, njll bashintshisane nje njengoba umdali can / enza ephusheni lakhe (indiza ngaphezulu) nge 'onodoli' 7 bhiliyoni / abantu kuyo. Izindaba eziningi zenkolo ezifana nokuthi sidalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu nabanye abaningi ngokuzumayo sithatha okuthile uma ubheka umhlaba ngale ndlela.
Lokho bonke abanye abantu ukuthi sithola kuphela babengeke besaba nomuzwa kuyinto wagula kakhulu ukuzazisa Iqhinga kanye okungalungile ngokuphelele (zobugovu) Isiphetho ungenisa wukuthi esiyikho sekulingisa zokuphila noma ukuthi ukuphila, izwe oluphakathi kuyinto sekulingisa.
Lo Bernardo wayesebenza njengengcweti ye-AI futhi uthola umbono ocacile wokuthi wabona ukuthi umuntu oqaphelisayo uhlale edingekayo lapho kubalulekile khona ukuhlakanipha. Futhi lokho akukaze kwenziwe emhlabeni wenyama. Lokho ukuhlakanipha okuyiqiniso okufakelwayo akunakwenzeka.
Ngesinye isikhathi, angizange ngifundiswe ngenkolo futhi ngiyaxolisa ngolimi-ukuhlaselwa lapha naphakathi, kodwa anginakho amagama angcono.
24 March 2018 ku-23: 02
Umqondo wokuthi 'umdali' awuvezi lutho nje kuphela 'umakhi walesi siminganiso' (umakhi oyinhloko wokukhululeka). Waqala ukuzibiza ngokuthi unkulunkulu.
I-AI ayikwazi ukwenza ngaphandle kokuphefumulelwa yiyo impela imiphefumulo kule ndoda yejele manje kufanele ixhumanise i-bio-avatar-ubuchopho kwi-intanethi.
Ngakho i-AI akuyona ingozi enkulu ebantwini njengoba u-Elon Musk ephikisa, kodwa u-Elon Musk kumele asenze sikwazi ukugxilisa ubuchopho bethu kwi-intanethi ukuze i-AI ingathatha imiphefumulo yethu. Lona kwakuwumgomo oyinhloko wokufaniswa kweLuciferian esiphila kuyo. Ngenkolo esasidingeka sinikeze umphefumulo wethu kuLucifer (owafihla ngemuva kwekulunkulu weBhayibheli, i-Qur'an, njll) futhi ngewebhu emhlabeni wonke kuhlanjululwe nakakhulu.
I-lace ye-neural (ukubopha ubuchopho) isetshenziselwa ukuba sisondele ngokusemandleni ekuphefumulelwe kwethu futhi siyisebenzise ngendlela efana ne-AI. I-AI ifuna ukufaka ingqikithi yokuthi ubani esiyikho ngempela: ukwakha imiphefumulo enekhono elikhulu.
Lucifer onaleli sekulingisa umphefumulo ejele eyakhelwe kodwa 1 injongo: imiphefumulo yethu wajoyina ukopha futhi uxhumanise AI yayo ngakho angenza sokudonsa ngoba amandla ungqimba yokuqala (ngaphandle sekulingisa). Kodwa lokho empeleni isahluko esisha kulolu hambo lokuvusa.
24 March 2018 ku-22: 17
Ngombhobho we-disco Ngisho ibhola yesibuko njengoba ubona / ubona kuma-discos.
Ubuchopho bungummelelo wenyama nje walokho esikucabangayo; kukhona abantu abathi, ngenxa yengozi, abanakho ubuchopho bashiya futhi baba nokuphila, babe nengqondo yokusebenza.
Ukuqonda kwakho akusekhanda lakho; ikhanda lakho (kanye nalo lonke 'izwe' lomzimba) likhona ku (yakho) umuzwa.
Kwasithatha izinyanga ukuba ngizicabange lokhu, kodwa ke zonke izingcezu ze-puzzle zawela endaweni.
24 March 2018 ku-22: 39
Cabanga ngobuchopho njengeprosesa yekhompyutha yakho ye-bio-avatar.
Singabantu, njengamanye, ama-bio-computer amakhemikhali lapho umphefumulo ungumhleli.
Uma manje udlala umdlalo kwi-playstation ps4 uzobona enye ipopayi esikrinini se-2D flat. Umphefumulo wethu awusaboni lo mdlalo kusikrini esiphezulu, kodwa kumdlalo, kudoli. Ubuchopho buyi-processor kuphela elinganiselwe yalowo mbhalo we-bio-avatar.
Ubani ngempela ukuthi ungumphefumulo. Ngokushesha uma uzibona ngokwakho kuleso simo, ukuqwashisa kuqala ukubuyela kulokho oyikho.
Awuwona umzimba wakho noma imicabango yakho noma umbono wakho kanye nokuhlangenwe nakho kwakho. Wena ungumphefumulo futhi kuyingxenye kule ngqikithi (lokhu kulingiswa) futhi ingxenye yayo yangempela. Empeleni azikho izingxenye. Umphefumulo wakho yi-1, nakuba kubonakala sengathi ihlukaniswe kusukela ekusuka kwayo. Ukuqubuka kwe-quantum kudlala indima yalo lapha.
24 March 2018 ku-22: 52
Ayikho i-biology noma impahla ayikho ngempela. Uma ufaka iseli ngaphansi kwe-microscope futhi usondeza ngokuningi, ngakho konke akulutho nje ukudlidliza noma iphakheji lwazi. Ngakho konke lokhu okubonakalayo akuyona into nje kuphela iphakethe lwazi. Kuyinto edabukisayo ebonakalayo ebonakalayo futhi ejulile nomuzwa simulation. Sizoqonda ukuthi okuningi nangokwengeziwe njengento yangempela engathandwa yiyo ngemidlalo njll kuya ngokuya "ngokwethenjelwa".
Ngakho umzimba wethu noma i-bioavatar akuyona into engaphezu kokubona komphefumulo. Lokhu kusebenza nakuzo zonke izinto ubuchopho balowo mbhalo we-bio ucabanga.
Emdlalweni we-PS4 (playstation) ulawulwa futhi ulawula imbonisi esikrinini. Kulo mdlalo umphefumulo wakho uphinde ubheke ezinkinobho; okungenani sesivele sikhohliwe ukuthi kungenxa yokuthi sisuke sinyatheliswa ekuzileni kwethu okuyinhloko (ukuqonda kwethu kobuchopho) ngokuhlela. Nokho, umphefumulo yilowo ophethe izilawuli. Ubuchopho balobu bio-avatar buhlotshiswe izinhlelo zokuzikhethela. I-bio-avatar yethu iye, njengokungathi, intando eyakhelwe ngaphambilini. Cabanga ngalokhu njengokufana nesistimu yokusebenzisa ikhompyutha. I-PC yakho igijima ku-Windows OS noma i-Mac OS. Umzimba wakho ugijimela ku-Lucifer OS, ngakho-ke lokho kunzima kakhulu, ngoba lokho kuhlela kwangaphambi kwemvelo akuwona umthombo ovulekile ngempela futhi ushiya ukungena komphefumulo omncane. Iqhinga ukuyiqaphela, ukuze ukungeneka kwe-quantium kusebenze futhi umphefumulo wakho uthola ukulawula okungaphezulu kwe-bio-avatar yakho.
25 March 2018 ku-20: 29
Angikaze ngiphume kulokho umphefumulo uqobo.
Ngaphezu kwalokho, ngicishe ngivumelane nawe uma ungena esikhundleni sobuchopho 'ngolwazi' ngoba lokho kusho ukuthi ucabangisisa ngezinto ezibonakalayo.
Kuye kwaboniswa ngokwesayensi ukuthi ukwazi kwethu kungaphandle komzimba wethu. http://www.superconsciousness.com/topics/science/why-consciousness-not-brain Ungabiza ngokuthi yizwe elingokomoya, kepha ngingathanda ukwenza lokho ngoba kuningi okungabonakali okubhalwe ngakho.
Ukuqiniseka okuwukuthi asisoze sazi lutho ngokuqiniseka ngalokhu kuqonda kanye 'nezwe' noma indawo lapho 'kungu' khona.
Ngivele ngikwenza 'amaphutha' ngenhla ngokusebenzisa amagama omhlaba nokuba khona, ngoba lezi yizinto eziba nencazelo ekuhlangenwe nakho kwethu ngokomzimba noma zibe nesisekelo esihlangenwe nakho enginakho.
Ngaphandle kokuthi ukukhuluma ngalokhu kunzima kakhulu, kungaphezu kokuba nalokhu kuqonda kungabi nengqondo ukuyifunda ngokuqhubekayo ngoba wazi ukuthi ngeke ukwazi ukwazi ngalokhu futhi uma kungenakukuphazamisa impilo yakho, isipiliyoni esingokomzimba onakho.
"Ubuchopho balesi si-avatar buzimisele ukukhetha ngokwenza izinhlelo." Ngicabanga ukuthi lokhu kuhluke kakhulu, kodwa mhlawumbe kuphela igama elihlukile.
Ukuqaphela (i-1!) Ukuzitholela ngokwayo ngokusebenzisa indawo yonke (ingoma ye-1). Ikwazi ukuzitholela kuphela ngokwedlulele futhi zibukeke ngokwazo.
Okuhle nokubi yizici ezihlobene futhi okuhlangenwe nakho kwethu nakho nakho. (Kubantu abangakaze bahlangane nakho, usuku olungenawo amandla seluyinkinga enkulu, ngaphandle kwezigodi ayikho iziqongo njll)
Kodwa njengoba sinobufakazi bomuntu kanye nombono ofanayo, kungazelelwe kukhona okuthile ngokuhle kakhulu (unkulunkulu?) Futhi kubi (ukukhuluma) ukukhuluma. (Okuthile kuhle uma kuhle kuwo wonke umuntu.)
Ngami kuncike ekutheni sinomzabalazo wangaphakathi nolwazi lwethu olujulile ngalokho okuhle (unkulunkulu) (singazizwa kahle kakhulu ezinhliziyweni zethu) ngokumelene nezilingo ze-ego (satanism) yikuphi 'uhlelo' kuphela (okudingekayo okubi?) yengqondo iyadingeka ukuze ube nesipiliyoni sezwe lomzimba.
Ngakho-ke sinalo izwe elifanelekile futhi liyikhethelo yethu (inkululeko yokuzihlanganisa / ukuqonda) kungakhathaliseki ukuthi sidala izulu noma isihogo emhlabeni. Ngalo mqondo sakha umhlaba wethu (ngokubambisana) futhi uma siqaphela ukuthi wonke umuntu uyona (i-eyodwa / i-1 consciousness), ngeke acacise ukuthi ububi buyoba khona emhlabeni. Kodwa njengoba yonke into eqinisweni yethu ibhekene nokulinganisela, asisoze sikwazi ukudala izulu eliphelele noma isihogo emhlabeni, nakuba sihamba ngokushesha esihogweni okwamanje.
Kodwa emuva ku-AI; ungesabi nalokhu; ukuhlakanipha (ukuqonda) akukwazi ukudalwa kulokho esikuhlangenwe nakho esikulo futhi sibize ngokoqobo ngokomzimba, ngoba kungumamukeli (umbukeli) walokho okuhlangenwe nakho futhi akukhona ezweni lomzimba.
I-Krypto Rif wabhala:
25 March 2018 ku-17: 38
njengoba eyaziwa, akukho lutho olukhona njengokungathi luyindaba. sinamandla ngomphefumulo njengenduna ye "imoto" esiyibiza ngomzimba. Ngicabanga ukuthi i-uniform yombhalo ingcono ngoba siye sakhanga futhi kukhona esinye isikhathi esizayo, ukuthi kufanele ususe umfaniswano ukuze ubuyele kwisigaba esilandelayo (isigaba sokuphila somphefumulo). hhayi njengokuphindukuzalwa.
j njalo ukhuluma ngokubhekisisa kanye ne-bible / koran ngokuphefumula owodwa nokuthi lisetshenziselwa ukuphikisa okulawulwayo.
konke kunesiqalo nesendaweni yokugcina. Uvelaphi umphefumulo wakho? Kwenzeka kanjani ngokusho (njalo) kuqala. Ngicabanga ukuthi awucabangi umbono kaHubbard oyinhloko noma wesayensi.
Nginesifiso ngempela mayelana 'ne-genesis' yakho. noma ingabe konke kwenzeka ngokuzenzakalelayo?
lapho okuhle kuhle konke kulinganiswe ekugcineni. uma unomdlalo nesifiso sakhe sokufuna ukulawula noma ukusigcina sigxotshiwe. Ucabanga ukuthi yisiphi isitha sakho nesisusa sakho?
futhi uMnu Bernard (igama elilodwa kuphela), lo mkhwabanisi umane nje ungumdlali noma umsizi okufanele asiphazamise futhi asiqinise
25 March 2018 ku-18: 38
Imibuzo emihle. Ukuze ukwazi ukuphendula lokho ngokuqiniseka, cishe kufanele ube uhlobo lobuNkulunkulu (engingazibongi). Ngombono wami, ngincike kakhulu ekusebenzeni kamuva kukaWes Penre, osesicocweni sakhe sokuqala kubonakala sengathi uhileleke kakhulu ekuthungeni iziteshi, kodwa uthola ocwaningweni lwakhe kamuva ukuthi konke lokhu kudukisa kakhulu.
Eqinisweni, kusho ukuthi uLusifer uye wakha ikhophi ye-original futhi ukuthi imibhalo yenkolo njengeGenesise nayo ivela kuye.
Kuhamba kakhulu ukuze kufinyelele ngokufingqiwe leyo ncwadi ngolwazi (funda: umbiko wosesho lwakhe).
Eqinisweni, ngokusho kwalolo mbono, uLusifer ufuna ukubamba amandla futhi udinga ibutho lomphefumulo kulokho. Yingakho sidinga ukudlulisa. Kumelwe, njengokungathi, sihlangane no-Luciferian intelligence yokufakelwa.
Esikhathini sangqimba sangempela kukhona futhi unkulunkulu / umdali noma amandla wegenesis. U-Lucifer uyisiphephelo sokuhlubuka. Lokhu kufana nendaba yeBhayibheli, kodwa ihluke kakhulu ngezindlela eziningi.
Angiyincoma kakhulu imisebenzi yangaphambilini yeWasp Penre, ngoba lena yizincwadi ze-enrome futhi (njengoba kamuva eyitholile) isendleleni engafanele. Futhi ngezinye izikhathi angivumelani naye.
Kuphela emsebenzini wakhe wokugcina i-penny ibonakala iwa kahle futhi iphinde ibambe phakathi kwazo zonke lezo ziteshi, njll. Khona-ke uvela ngombono engiwuxhuma kakhulu kuwo.
Ngizokwenza umzamo kanye ukwenza isihloko esiqondakalayo.
Ekugcineni, konke kuhlala kusekelwe enhlotsheni ye "inkolelo yokukholelwa", ngoba ubufakazi obunzima bokubheka phambili bungenziwa okungenakwenzeka kule nsima. Kodwa uPenre uye wenza ucwaningo oluthe xaxa. Futhi uma kuziwa emibonweni yakhe, ngincoma ukuthi ngibuke ngeso elibucayi kakhulu.
28 March 2018 ku-12: 55
Kukhona izibalo ezanele ezizibiza ngokuthi unkulunkulu, ngakho-ke uma udinga. akukho ukusweleka kwabaprofethi bamanga. Ngenze ucwaningo ngoMnu Wes Penre. Kusukela ku-bio yakhe kubonakala sengathi i-rocker endala, elahlekelwe izidakamizwa nokuphuza, owayengumalungu womphakathi oyimfihlo, ilungu eliphakeme kunalelo qembu, wenza / enza umlingo omnyama. futhi ngaleyo ndlela wathola izimpendulo, futhi uqhathanisa zonke izinkolo nomphakathi oyimfihlo phakathi kwekhala nezindebe noma njengoba echaza:
... futhi nginebanga eliphakeme kulo mphakathi oyimfihlo ngasekupheleni kwalowo nyaka. Ngifunde izinto eziningi eziyimfihlo kanye nemisebenzi eminingi yemilingo endleleni yami. Ngakwazi ukubuka okude, futhi nginamandla amandla angaphezu kwamandla ngenxa yamasiko "ayenziwa emphakathini.
Ngeke ngize ngize ngiye phezulu (noma i-OFFICIAL "phezulu") Ngaqala ukubona ukuthi kukhona okungalungile. Into ethile ayizizwanga kahle, nakuba ngazizwa nginamandla kakhulu "futhi nginokukhanya" futhi ngithole imibuzo embalwa mayelana nokuphila ezingeni lezomoya, nangokwenyama. Umphakathi wasitshela ukuthi AKUFUNDI ezinye izinkolo noma amafilosofi ngaphandle kwalokhu. Uma wenza kanjalo, uzobe ulungiswa ngobuqotho futhi ulungiswe kahle. Isizathu esanikezwa lokhu kwakuwukuthi uma uhlangana namafilosofi ahlukene, ulahlekelwa indlela yakho futhi udideke. Njenganoma iyiphi inkolo, LOKUPHAKATHI umphakathi wangasese oyimfihlo wawuyimpendulo eyodwa kuya kweyodwa.
le Penre isebenzisa umsebenzi kaZakharia Sitchin, umbhali! owabona ukukhanya futhi weza ukuchaza isintu lapho sivela khona. lokhu ngenxa yokuhumusha kwakhe okulungile kuphela kwezibhebhe zobumba zaseSumerian. siyilingo labantu base-reptilian Anunnaki! Ngenxa yezinto eziwusizo kanye negolide elithile, umhlaba wakhethwa ukuba uphangiwe futhi izinkawu zenziwa ngabantu ngokuzivumelanisa ne-DNA.
Ngizokusho ehollandsch yakhe. Ngicabanga ukuthi ujwayele le ndaba ...
Ngakho singabona lokhu uZakariya njengomfundisi wePenre. Ngokusekelwe enkulumweni yakhe, i-Penre iye yasungula inkolelo mayelana nemvelaphi yomhlaba nesintu. ukhuluma ngokucwaninga okuningiliziwe. indaba yakhe iyangikhumbuza uThro movie nomfowabo uhlakaniphile kodwa omubi uLoki.
Kodwa-ke, ngisaluthola impendulo yombuzo engangiwubuza emlayezo wami ngenhla. Ukuqala kwakho konke lokhu, futhi angisho umhlaba kuphela. Ngikhuluma ngabo bonke ubukhulu, izidalwa, amandla! Ucabanga ukuthi umphefumulo wakho uvelaphi? futhi konke lokhu kwavela kanjani?
uma ngilandela ukucabanga kwePenre ngale ndaba (okungukuthi, ngephutha, angikholwa!). Kuphi lezi Anunnakie, lo mama unina nomyeni wakhe bevela ezinganeni zakhe (1tje yi-lucifer)? ngubani noma wenzani? bebehlale belapho? wonke umuntu angaba unkulunkulu ngokwePenre. ngubani onguNkulunkulu oyinhloko, noma ingabe akakho nje?
ngibuye ngihlangane noMnu. Leo Zagami kwiwebhusayithi yePenre. lo mnumzane naye uvela emibuthanweni ephezulu yezinhlawulo, futhi ungumculi womculo ophumelelayo obiza konke. kodwa akunikezeli ubufakazi. bonke bavela emphakathini oyimfihlo futhi bafuna ukusixwayisa. uzwakala kancane njengomngane wethu uBernard, umbhange!
Ngilindele isihloko sakho esiqondakalayo ...
29 March 2018 ku-10: 26
Lolu lwazi luyaphakamisa imibuzo edingekayo mayelana noWes Penre, lapho kufanele kuqashelwe ukuthi uphinde ugxeke umbono kaZitchin futhi uthi uyadonsela iziphetho ezingalungile. Kumele ngikutshele ngobuqotho ukuthi angizange ngikwazi lokho futhi ukuthi empeleni ukufaka ukukhanya okuhlukile kakhulu kulolu cala. Kuyinto okungenani ephawulekayo (futhi esolisayo) ukuthi abantu abanjalo baye baphakama kakhulu esihlahleni seMasonic.
Uma usho lokhu, kufanele kucace ukuthi angikwazi ukusho ngokuqiniseka ukuthi i-genesis yami ibonakala kanjani. Ngibhala konke engikuthola kusayithi ngangokunokwenzeka.
Ukuqhathaniswa noRonald Bernard kungase kungabi into enjalo. Ukusola kwami ​​kusho ukuthi uBernard naye 'ungumsebenzi wezitini'. Iphuzu ukuthi bavame ukuxuba iqiniso elikhulu nge-disinfo.
25 March 2018 ku-20: 45
26 March 2018 ku-10: 19
UMnu Be (r) uNard ungalinganiswa noMnu. Colijn othile;
Uzolala ngokuthula, uhulumeni ubheka wena. "
Bona futhi iwaom https://www.leuk.nl/leuk/0110_basisPagina.php?archief=1&itemId=1651&catId=35 noma i-google ngokwakho.
uMenien Beneni ufuna ukusenza "amadada ahlezi". Stupid flabby ngokuthi Zombies iPacific, okuyinto lapho Friend iRed Army ( "iRed Army" ukubona UJüri ULina ngaphansi isibonakaliso isib scorpion.) Kungenziwa buthule isuswe ku-(Gulag / Wadden) emakamu ngapho buthule Lokudlulisa umbono ukuhoxiswa- ukubulawa ukuze ukwazi ukubulala. Kungani? Kungenxa yokuthi sine- [TE] abaningi noma ngoba bazonda kuphela ukuthi sizizondayo. Uyazi abantu.
Ngingasho (ngaphandle kwe-mienier beRnard): "Ukuvusa abantu, ukuvusa ..."
I-Ps Uma othile emi ngezinzwane zami, ngizokucela kuqala.
Uma lowo muntu eyeka, ngizobuza futhi, kodwa ubuze okungaphezulu. Noma kunjalo, uma ehlala emva kwalokho, ngizomnika ngempela inqama ekhanda lakhe! FUNDA! Izwe liyaxolisa kangaka, alivunyelwe ukukhuluma kwabanye, kodwa lenza izwe lami libe nomunye.
26 March 2018 ku-10: 28
Well Ngiyazi ukuthi umuntu kanzima ukuthengisa buhlungu Zn ikhanda likhulu kakhulu futhi onamandla kunami, futhi ngempela nezempi futhi amaphoyisa ngemuva noma olungcono ngabo (elite (sic), futhi kubonakala kungenakwenzeka, kodwa njengoba zithi: "izandla eziningi ukwenza umsebenzi ukukhanya" thina, thina abantu abaningi Ngempela izwe lethu, inani labantu emhlabeni, kuphela kukhona ezinye izinhlobo ziphila ngezinto esimila eziye wadlalela ngakho smart futhi namanje ukudlala ukuthi. suctioning umhlaba wonke, noma okungenani bafuna. Kodwa ngeshwa okwamanje futhi yami / sinethemba ukuthi akuwona wonke umuntu ongase "indebe" elite lobugebengu. Russia? China cishe enza? futhi mhlawumbe Iran.
Ngeshwa, ngisho sidlala lo mdlalo kancane kancane. Nathi, sibahaha, futhi ngezinye izikhathi siyazikhohlisa "inqwaba" yomkami, ikhasimende, ... ugcwalisa wena.
Futhi sifuna futhi (njalo) indlu enkulu, i-duuuuurdere auto ngaphezulu i-niciiiiere lokhu noma leyo ... njll njll njll njll.
2 April 2018 ku-07: 55
Ngicabanga ngalesi sixhumanisi noMarianne Zwagerman njengengxenye entsha (okuhloswe 'kujwayelekile', isiDutchman esivumayo?)
Ingxenye yale ngxoxo mayelana negama eliphansi elifundiswayo liphendukela ku-Facebook futhi ngicabanga ukuthi ligcwele i-NLP:
« UMartin Vrijland Ikhasi le-Facebook lisusiwe ngokucwaninga nokuhlola
Inkampani ye-Neuralink ye-Neuralink ye-neuralink izovela ngokuqondile ku-DARPA (njenge-intanethi kanye nama-smartphone) »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.933.828